Panel tontonana indostrialy pc
kitiho ny PC inone rehetra
ao anaty pc iray daholo
Shenzhen ThinkView Technology Co., Ltd natsangana tamin'ny taona 2008, mifantoka amin'ny fampivoarana sy ny famokarana vokatra solosaina toy ny All in one PC, Touch AIO PC, Gaming Monitor, Touch Monitor, Gaming AIO ary mini box PC. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro, ohatra amin'ny i-cafe, fanabeazana, birao, hotely, rafitra CASINO, fitaovana indostrialy sy fitsaboana ary fialamboly an-trano.
Manana ekipa mahay mampiorina ny R&D izahay, ny fitantanana sy ny fanamboarana, ary mazoto amin'ny fotoana rehetra, mitandrina amin'ny antsipiriany ary mikatsaka tsy misy kilema hatrany ny vokatra, noho izany dia afaka mihaona tsara amin'ny takian'ny mpanjifa sy ny zavatra andrasana izahay. Ary ny vokatray dia ekena amin'ny karazana fanamarinana kalitao rehetra toy ny CCC, CE ary FCC. â € œProfessional and Dedicatedâ €, ary â € œHalenta avo lenta sy fahombiazana â € no teny filamatra hatrizay.
Efa nanolo-tena taona maro izahay hanara-maso ny vokatra R&D PC sy ny fanavaozana. Mba hihaonana amin'ny fahasamihafan'ny mpanjifanay sy ny fitakiany manokana dia mitazona hatrany ny fifandraisana akaiky sy fifanakalozana ara-teknika amin'ny rojom-panolorana ambony izahay, toa ireo mpamatsy tontonana LCD an'ny SAMSUNG, AUO ary BOE, mpamatsy CPU an'ny Intel. Mandritra izany fotoana izany, miasa tsara miaraka amin'ireo masoivohontsika ThinkView manokana sy marika lehibe hafa maro izahay ohatra, ViewSonic, ZTE, GreatWall, Hedy, Haier.
Ny mpanara-maso anay sy ireo solosaina rehetra ao anaty solosaina iray dia efa amidy avokoa na amin'ny tsena anatiny na any ivelany toy ny, USA, Canada, Russia Vietnam ary ny firenena amerikana atsimo. Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fiaraha-miasa sy ny tombotsoan'ny tsirairay, dia raisinay ny mpanjifa manerantany ary manome am-pahatsorana ny vokatra sy ny serivisy amin'ny vidiny tsara indrindra izahay.
 Rihana 4, Trano A, Faritra Indostrialy Tangtou Fahatelo, làlana Shiyan, Distrikan'i Baoan, Shenzhen
Copyright © 2020 Shenzhen ThinkView Technology Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.